MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 838
>Quotes for October, 2008
> အောက်တိုဘာလ စာကိုး စကားကိုးအောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ” နအဖအစိုးရကို ဖားပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး တချို့ သူမှားတာရှိတယ်။ မှားတာ တမတ်ဖိုးပေမယ့် အောက်က သူက ခိုင်းထားတဲ့တပည့်က သူ့အာဏာတမတ်ဖိုးပေးလိုက်တာကို တကျပ်ဖိုး သုံးတဲ့အတွက် ပိုမှားတယ်။ အခု ရှင်းရှင်းပြောရရင် နအဖအစိုးရလည်း ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လိမ်လည်ခြင်းကို ခံနေရတယ်။ အခုချိန်ထိ သူ့ကိုယ်သူ လိမ်ပြီးခံရတယ် ဆိုတာကို မသိသေးဘူး။” ဦးအေးမြင့် (လုပ်အားပေးသတင်းများစုဆောင်းဖော်ထုတ်မှုကြောင့် သေဒဏ်ချခံရဖူးသည့် ရှေ့နေ)၊ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ၊ အောက်တိုဘာ ၁၇ “လူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သံဃာတော်တွေဟာ လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရေးအခင်းတွေ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ သံဃာတွေဟာ ၀န်ကြီးနေရာလည်း မယူပါဘူး၊ ၀န်ကြီးချုပ်နေရာလည်း မယူပါဘူး၊ ရပ်ကွက်လူကြီးနေရာလည်း မယူပါဘူး ဒကာကြီး၊...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 14
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 14 October 30 th 2008 (Save water … ) No tags for this post.
>Nay Phong Wai short stories 01
> ကျွန်တော်နှင့် ၃၁ ဘုံ မြို့သားများနေဘုဏ်းဝေအောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သူမကို သတိရလို့ လေချွန်မိတာပါ။ နတ်ဆိုးတွေကို လက်ယောင်ပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင် ခင်းထားတဲ့လမ်းမှာ ကျွန်တော် အတော်ဆန့်လိုက်တော့ အတ္တနဲ့ နည်းနည်းလေး ကပ်လွတ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်သာ တံစိုးလက်ဆောင် မက်မောနေမယ်ဆို ကျွန်တော့်ဈာပနကျရင် သားဆိုးသားမိုက်လို့ အမည်တပ်လိုက်စမ်းပါ အမေ…။ မိုက်မဲခြင်းအမှုမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေတဲ့ကောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုကို အကြောဆေး ထိုးစရာမလိုဘူးလေ။ ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လည်း ဒီလမ်းမြန်မြန်လျှောက်လည်း ဒီလမ်း။ အကုန်လုံးအားနည်းနေတဲ့ ခရီးကြမ်းမှာ ကျွန်တော်က အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို ပူဇော်ကိုးကွယ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဝဋ်ကြွေးချင်းတူရင် အချင်းချင်းပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့တတ်တဲ့ကောင်ပါ အမေ…။ အမိုက်မှောင်ဆိုတဲ့ မှုန်ဝါးဝါး ခပ်ဖျော့ဖျော့ အလင်းရောင်အောက်မှာ ကျွန်တော့်ငယ်မူငယ်သွေးဘဝကို အပေအတေ သိုးမည်းတွေနဲ့တော့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။...
>Maung Yit – Stone Age Peace Process
> ကာတွန်း မောင်ရစ် – ကျောက်ခေတ် ငြိမ်းချမ်းရေး အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (ပြန်လည်ဆန်းသစ် ကာတွန်း) No tags for this post.
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ တတိယမြောက် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့၊ ၇ ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အီတိုး၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများ၊ ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရ မြန်မာကျောင်းသား၊ ပင်လယ်ဓားပြ ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည့် မြန်မာသင်္ဘောသားများ စသည့် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းများ မင်းခန့် ၏ ကဗျာ – တဖန်ပြန်လည် ဦးညွတ်ခြင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း – ဒီမိုကရေစီရအောင် ဘာလုပ်နိုင်သလဲ လူထုဒေါ်အမာ ၏ဆောင်းပါး – ဗန်းမော်တင်အောင် ဋီကာ (စီစဉ်သူ ထိန်လင်း) No tags for this post.
>BBC in Burmese
> ဘီဘီစီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မြန်မာလိုဖတ်နိုင်ပြီ မိုးမခအထောက်တော် ၂အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အသံလွှင့်ဋ္ဌာနက ၎င်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြလိုက်သည်။ ယခင်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ရာမှ ယမန်နေ့က စတင်ပြီး မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြောင်းလဲဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ထိပ်တန်းရောက် မြန်မာ နှင့် ကမ္ဘာ့သတင်း အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြထားသည်။ ပုံမှန်အစီအစဉ်များကိုလည်း အနည်းငယ် မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းထားသည်။ ၇ ရက်စာ ထုတ်လွှင့်ချက်များ၊ ပုံမှန်အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်နားဆင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ပြိုင်ဘက် DVB, RFA, VOA စသည့် မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်ဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာများကမူ သတင်းများကို အစအဆုံး ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဘီဘီစီက အင်တာနက်လိပ်စာကိုမူ ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ www.bbc.co.uk/burmese ဟူသော လိပ်စာဟောင်းတွင် myanmar...
>Nyunt Htwe – Burmese Generals stepping on Nargis to win 2010 Election
> နာဂစ်ကို အမြတ်ထုတ်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ် ညွန့်ထွေး အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းက စစ်အစိုးရရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ပြိုကွဲအောင် မတိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ မေလက နာဂစ်အပြီးမှာပဲ စစ်အစိုးရက သူတို့ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်တယ်။ ထောက်ခံမဲက တင်းကြမ်း များလွန်းတော့ မြန်မာပြည်မှာ အတိုက်အခံဆိုတာ ရှိသေးရဲ့လားလို့တောင် ထင်ရပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ် ဆိုတော့ အတိုက်အခံက ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း မပြောရသေးခင်မှာ စစ်အစိုးရနဲ့ ဘက်တော်သားများက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အဖျားတက်ကုန်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးတွေ၊ ဦးဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး ရုံးချုပ်တွေ၊ ၀န်ကြီးရုံးတွေနဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံက ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရှင်းလင်းပွဲတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်...
>Child Aid Foundation posted Orphans and Donors List online
> မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် စေတနာရှင်များ၏ Child Aid Foundation က ပြုစုကူညီထောက်ပံ့ထားသော မိဘမဲ့ကလေးသူငယ်များ စာရင်း ထုတ်ပြန် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် စေတနာရှင် မြန်မာမိသားစုများ ၀ိုင်းဝန်းပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ချိုင်းအိတ်ဒ်ဖောင်ဒေးရှင်းက ယခုအောက်တိုဘာလအတွင်း ကောက်ခံရယူထားသော နာဂစ် မုန်တိုင်းသင့် မိဘမဲ့ ကလေးသူငယ်များစာရင်းနှင့် ထောက်ပံ့ကူညီနေသည့် စေတနာအလှူရှင်များကိုပါ တွဲဖက်သည့် စာစောင်ငယ်လေးတခု ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယာယီ သတင်းပြန်ကြားရေးအတွက် တင်ဆက်နေသည့် http://childaid08.blogspot.com အပြင် အင်တာနက်စာရွက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်း ထုတ်ပြန်ရန် မှတ်သားရလွယ်ကူမည့် အင်တာနက် လိပ်စာတခုကိုလည်း စတင်လိုက်သည်။ လိပ်စာမှာ – http://ChildAidMyanmar.Org ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်များနှင့် အလှူရှင်များ စာရင်းတွင်...
>20 year anniversary of ABSDF
> ၈၈ အရေးတော်ပုံက ပေါ်ထွန်းလာသည့် ကျောင်းသားတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းခြင်း အနှစ် ၂၀ ပြည့် ပို့စကဒ်ထွက်ရှိ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၎င်းတို့ ၀က်ဆိုက်ကို သည်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ http://www.absdf8888.org/ No tags for this post.
>Burmese and Brazilian footballers play for Cyclone Nargis victims
> ဘရာဇီး နှင့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးပွဲဓာတ်ပုံသတင်းအောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ယမန်နေ့က အောင်ဆန်းကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဘရာဇီးအသင်း နှင့် မြန်မာအသင်းတို့၏ ဒုတိယပွဲစဉ်မြင်ကွင်း။ နာဂစ်မုန်တိုင်းရန်ပုံငွေအတွက် ပြုလုပ်သည့် ဘော်လုံးပွဲဖြစ်သည်။ ပရိသတ်တသောင်းခွဲကြည့်ရှုခဲ့သော အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် တဘက်တဂိုးစီဖြင့် သရေကျသွားသည်။ ဘရာဇီးအသင်းသည် ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှားအသင်းတို့နှင့်လည်း နာဂစ်ရန်ပုံငွေပွဲများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ (photo: AFP) No tags for this post.
>Burmese need to be listed in American Census 2010
> “- – ပညာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူ၊ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်မှု စသည့် အရေးကိစ္စများတွင် လူနည်းစုများအဖြစ် အထူးကာကွယ် စောင့်ရှောက် ဦးစားပေးမှုတို့ကို မြန်မာတို့ မရရှိ၊ မသိရှိရဘဲ ဥပက္ခာပြုခံထားရ – -“ အမေရိကန် ၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းတွင် မြန်မာပြည်ဖွားတို့ စာရင်းပေါက်ရန် လိုအပ်ဟု ဆို မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ လာမည့် ၂၀၁၀ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက နိုင်ငံသားတို့၏ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည် ဖြစ်ရာ မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာပြည်သားတို့ကလည်း “မြန်မာ” ဆိုသော စာရင်းပေါက်ရန်၊ တိုင်းပြည်တွင် မြန်မာဦးရေ မည်မျှရှိနေသည်ဟူသော စာရင်းအတိအကျ ပေါက်ရန်အတွက် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရေး ဆွေးနွေးနေကြသည်။...
>Win Pe Bag – 5
> ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၅ဦးသုခ၊ ဦးထွန်းဝေ၊ ဦးသိန်းဖေမြင့် နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းများဝင်းဖေ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီတပတ်တော့ အပြောင်းအလဲကလေး ဖြစ်သွားအောင် “၀င်းဖေလွယ်အိတ်”ထဲက ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တာကလေးတွေကို ဆွဲထုတ်ပြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုတွေ အများကြီး ရထားကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီး ဦးသုခ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးထွန်းဝေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းတွေ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာပေပညာရှင်ကြီး ဦးသိန်းဖေမြင့်တို့အကြောင်း ကျနော် တွေ့ဖူးသလို ပြောပြပါမယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်မှ ရုပ်ရှင် တကားနှစ်ကားပဲ ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရိုက်ရသေးတယ်၊ ၀တ္ထုဇာတ်ညွှန်းကလေး သုံးလေးပုဒ်ပဲ ရေးရသေးတယ်၊ ဆရာကြီးဦးသုခက ကျနော့်ကို ၀တ္ထုဇာတ်ညွှန်းရေးပေးဖို့ အလုပ်အပ်ပါတယ်။ အပ်တာမှ တခါတည်းနဲ့ သုံးပုဒ်တောင် အပ်ပါတယ်။ ဆရာဦးသုခဟာ ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ၀တ္ထုဇာတ်ညွှန်းတွေ ရေးပြီး...
>Burmese Literary Talks in SF & LA
> ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် စာပေဟောပြောပွဲများ ဆက် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၈၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာမှာ ဧည့်သည် စာရေးဆရာ ၄ ဦး (ဦးဝင်းဖေ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ ဒေါ်မာမာအေးနဲ့ ဆရာ အောင်ဝေး)၊ အိမ်ခံ စာရေးဆရာ ၁ ဦး (ဆရာ ဉာဏ်ဦးမောင်) တို့နဲ့ ၉ ကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲအပြီး နောက် ၂ ပတ်အကြာ နိုဝင်ဘာ ၂၃ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ လော့အိန်ဂျလိစ် မြန်မာမိသားစုများက ဆရာမောင်စွမ်းရည်၊ ဆရာ မောင်သာရနဲ့ ဆရာ အောင်ဝေးတို့နဲ့ အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပကြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။...
>Remembering Masoeyein Sayadaw U Kovida (Sasana Moli) Part 3
> Remembering Masoeyein Sayadaw U Kovida (Sasana Moli) Part 3, Talk with Burmese Community at SF Bay (16th Dec 2008) October 28th, 2008 No tags for this post.
> ( animation by akouri.blogspot.com ) တနင်္ဂနွေ နံနက်ခင်း၊ ဟော်လိုဝင်း နှင့် ရင်တွင်းဝေဒနာအရှင်ဉာဏိကအောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့။ နံနက်စောစော အချိန်ရလို့ အနီးအနားရပ်ကွက်ထဲကို လမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်တယ်၊ တစ်နာရီနီးပါးကြာကြာ။ အိမ်ရှေ့တွေမှာ ဟော်လိုဝင်း (Halloween)အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတတွေ ချိတ်ဆွဲ တန်ဆာဆင်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာအရုပ်တွေ ချိတ်ဆွဲထားပေမယ့် စိမ်းလန်းတဲ့ မြက်ခင်းပြင်တွေ၊ ပန်းခင်းတွေ၊ အလှစိုက်ထားတဲ့ သစ်ပင်လေးတွေ၊ သစ်လွင်တောက်ပပြီး သပ်ရပ်ကောင်းမွန်လှတဲ့ အိမ်တွေ အောက်ခံ နောက်ခံနဲ့ဆိုတော့ တွေ့မြင်ရတဲ့အရုပ်တွေက ကြောက်ရမယ့်အစား နှစ်သက်သဘောကျစရာ ဖြစ်နေတယ်။ ဟော်လိုဝင်းနေ့ (Halloween Day)ကို အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပလေ့ရှိကြတာမို့ ဒီသီတင်းပတ်ကုန်မှာပဲ ဟော်လိုဝင်းနေ့ လာတော့မယ်။ သို့ပေမယ့်...
>White Rainbow Poem Festival – Part 2
> White Rainbow Poem Festival – Part2MoeMaKa VDO October 27th, 2008 No tags for this post.
>Maung Yit, OBama and Daw Aung San Suu Kyi
> သမ္မတလောင်း အိုဘားမား အခု ၄၇ နှစ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ တုံးက ဒေါ်စု ၄၃ နှစ် မောင်ရစ် အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ မက်ကိန်းနဲ့ အိုဘားမား ဘယ်သူကို ထောက်ခံသလဲလို့ မေးကြတယ်။ နိုင်ငံတကာက လူတွေက အိုဘားမားကို ထောက်ခံကြတယ်လို့ ရီးဒါးဒိုက်ဂျက် စစ်တမ်းက ပြောတယ်။ အမေရိကန်တွေကတော့ တ၀က် တ၀က်လို့ စီအင်အင်က ဆိုတယ်။ အခုတော့ အိုဘားမား နည်းနည်းတော့ နှာတဖျားသာလာပြီ ဆိုတယ်။ အိုဘားမားက မျိုးဆက်သစ်တွေ၊ လူငယ်တွေကို မဲရုံဆီ ခေါ်နိုင်တဲ့လူ။ လူကြီးတွေပဲ မဲပေးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးကနေ ကန့်လန့်တိုက်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ၊ လူငယ်တွေကို မဲရုံထဲကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ လူ၊ မဲပေးတဲ့...
> ဂျမားတို့အဖိုးဇော်မင်း (လူ့ဘောင်သစ်)အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ သူ့မှာ ဗမာနာမည် ရှိပေမဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးက ငယ်ငယ်တည်းက “ဂျမား” ဆိုသော အိမ်နာမည်ကိုသာ ခေါ်ကြသောကြောင့် ဗမာနာမည်ကို ဘယ်သူမှ မမှတ်မိတော့။ ဂျမား၊ နီတွတ်နှင့် ကံသိန်းတို့သည် နှစ်တန်းလောက် ကတည်းက လည်ပင်းဖက်၍ ကျောင်းနေခဲ့သူများလည်း ဖြစ်သည်။ ဂျမားမိဘတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းက ဘဲမွေးမြူခြင်း။ သူတို့မိသားစုက အစ္စလမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်၍ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား သွေးနှောထားသော ရုပ်ရေ သွင်ပြင်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သူတို့ရွာက လူအများစုသည် မွတ်စလင်များ ဖြစ်သည်။ ထိုရွာသားတို့သည် ရှေးဗမာ ဘုရင်များ အဆက်ဆက် လက်အောက်တွင် အမှုထမ်းခဲ့ကြသော မြန်မာမွတ်စလင် စစ်သည်တော် အနွယ်များမှ ဆင်းဆက်လာ သူများလည်း ဖြစ်သည်။...
>26th October 2008 – MoeMaKa Radio Sydney
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ထရံပေါက်ကြားက နေပြောက်ကလေး – ခင်ညွန့်ရည် မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ၁၄ ကြိမ်မြောက် KNU ကရင်အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက် သတင်းကြေညာချက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ ငြိမ်းချမ်းရေးစကား ဂီတလုင်မောင်ကိုကိုနှစ်ပတ်လည် အလွမ်းပြေနဲ့ကြော်ငြာများ ဆစ်ဒနီတလွှားသတင်းစကား၊ Australia စီးပွားရေးအနေအထား မြန်မာရှေ့နေဦးဖီးလစ်စမိုက်ရဲ့ဥပဒေရေးရာတင်ပြချက် သောတရှင်သခင်တို့ရဲ့ ရေဒီယိုအိမ် – တေးသစ် ဦးပန်တျာ စီစဉ်သူများ – ဦးပန်တျာ၊ နှင်းမြတ်ခိုင်၊ ကြည်ပြာချမ်းမြေ့၊ ရန်လင်းမောင် No tags for this post.
>comedian Russell Peters
> လူရွှင်တော် ရပ်ဆဲပီတာ(Russell Peters)မိုင်မြစ်ကြီးနားအောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ တနေ့က မိတ်ဆွေတယောက် အီးမေးပို့ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုလင့်ခ်ကို ကြည့်မိတော့ တော်တော်လေး သဘောကျသွားတယ်။ ဒါနဲ့ အခြားသူတွေကိုလည်း ကြည့်စေချင်တဲ့စိတ်က ပေါ်လာကြောင့် ဒီစာကိုရေးမိပါတယ်။ (စာနောက်ဆုံးမှာ လင့်ခ်ကို ပေးထားပါတယ်) ဗွီဒီယိုက နိုင်ငံတကာမှာ လူသိများ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ လူရွှင်တော် ရပ်ဆဲပီတာ (Russell Peters) ရဲ့ ရယ်စရာ ပျက်လုံးတွေပါ။ Red, White and Brown လို့ ခေါင်းစီးနာမည်ပေးထားတဲ့ နောက်ဆုံးခွေအသစ်ပါ။ တစ်နာရီကျော်ကျော် ရှိပေမယ့် ပျင်းစရာတကွက်မှ မရှိ အလွန်ပဲ ရယ်ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေထဲမှာ အာရှတိုက်သားတွေလည်း များတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်က အာရှတိုက်သား၊ ပျက်လုံးအများစုကလည်း အာရှတိုက်သားတွေနဲ့...
>Mar Mar Aye 250
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၀)ရွှေပြည်ကြီး နီးအောင်ပင်လှမ်းချင်တော့မာမာအေးအောက်တိုဘာ၂၆၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ဒီနေ့ အိမ်ရှေ့ပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးကနေပြီး အိမ့်အပြင်ကို ငေးကြည့်မိတော့ – – မာလာငွေဖော့ ကြွေတော့မယ့် သဏ္ဌာန်လိုလို၊ ရွက်အိုရွက်ဟောင်း စိမ်းဝါမောင်းရင့် ညိုကျင့်ကျင့်တွေ လေသင့်ရာ ဟိုသည်အဝေး ရှပ်တိုက်ပြေးမယ့်သဘော ‘FALL’ ခေါ်တဲ့ ရာသီ ရောက်ခဲ့ပြီလေ။ အမိတိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ကော – – အနားမှာရှိတဲ့ ပြက္ခဒိန်လေးထဲ လှန်လှောကြည့်လိုက်ပါ့ – အဓိကရ အနီဝိုင်းလေးနဲ့ ပြထားတာ မြင်တယ်။ သြော်- သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကြီးပါလား၊ ဒါနဲ့ အိမ်သတိရ ဖြစ်သွားပါတယ်။...
>Myanmar tourism going down hill
> မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်း မရှုမလှ ကျဆင်းနေ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ မိုးကုန်၊ ပွင့်လင်းရာသီမှာ ပြည်ပခရီးသွားတွေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်မလာသေးပါဘူး။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် မျက်နှာပျက်နေရပြီ ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေလို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတို့အပေါ် စောင့်ရှောက်ခြင်း မရှိသည်ကို အဓိကထား ထောက်ပြကြပါတယ်။ “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာကတည်းက နိုင်ငံသားတွေကော နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့တယ်။ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံတော့လည်း ပြည်ပက လာမည့်လူတွေကို စိစစ်ပြီးမှ လက်ခံတယ်။ သာမန်ခရီးသွားတွေကလည်း လုံခြုံစိတ်ချမှု မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ကို မလာချင်ဘူး။ ဟော နာဂစ်ဖြစ်တော့ အစိုးရက နိုင်ငံခြားသားတွေကို ရန်လိုတယ်။ တားဆီးတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာတွေ လုပ်မပေးဘူး။ တမ္ဘာလုံးက...
>Maung Yit – Not to Lose Way in History
> တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ဒါပေမယ့် သမိုင်းမှာ လမ်းမပျောက်ဖို့ မောင်ရစ် အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ အခု တင်ဆက်မှာက ရုပ်သံအစီအစဉ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာတင်မိုးနဲ့ စကားလက်ဆုံ (၂၀၀၆ ဒီဇင်ဘာ ခရစ္စမတ်ကာလ)။ ၁၉၅၀ ခုနှစ် ဆရာ စာပေ၀ါသနာ အစပိုင်း ကာလများအကြောင်း မိုးမခ ရုပ်သံ။ ဒါပေမယ့် ဒီ ရုပ်သံမှတ်တမ်းလေးကို ပရိသတ်ကို မတင်ဆက်ခင်မှာ မီးခိုးကြွက်လျောက် တွေးနေမိတယ်။ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာက မိုးမခ ၃ နှစ် မိတ်ဆုံပွဲကို ကဗျာဆရာတင်မိုးနဲ့ ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်တို့ကို ပင်တိုင်ထားပြီး ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဆရာမိတ်ဆွေတွေ၊ ပရိသတ်တွေ ရပ်နီး ရပ်ဝေးက လာခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၀၆ ဒီဇင်ဘာမှာ ဆရာနဲ့ သူနေထိုင်တဲ့...
>(Photo – Aung Way & His Son at White Rainbow Poetry Reading Ceremony, 6th May 2006) ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း(၁၃) အောင်ဝေး အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးပြီးလို့၊ လေသံမြားသံတွေ စဲစပြုတဲ့အခါ၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို အရယူပေးဖို့ ‘ဖဆပလ’ အဖွဲ့ကြီး ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ‘ဖဆပလ’ အဖွဲ့ကြီးလောက် စည်းလုံး ညီညွတ်ပြီး ရန်သူက ခန့်ညားရတဲ့ အင်အားမျိုးဟာ ကမ္ဘာမှာတောင် ရှိခဲ့မယ် မထင်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးစီးတဲ့ ‘ဖဆပလ’ အဖွဲ့ကြီးဟာ ပထမ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ပထမလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲကို အရ ယူပေးခဲ့ကြတယ်။ အခု ဒုတိယ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲခေတ်။ ပထမလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတုန်းက...
>30 Year Anniversary of Passing of Bamaw Tin Aung
> ဗန်းမောင်တင်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၃၀ မြောက် အခမ်းအနားကျင်းပ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ကိုလိုနီစနစ်၊ နယ်ချဲ့စနစ်နှင့် အာဏာရှင်စနစ်ခေတ် တလျောက်လုံး တော်လှန်သော စာရေးဆရာအဖြစ် မဆုတ်မနစ်ရပ်တည်ပြီး ကလောင်လက်နက်ဖြင့် အာခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သူ၊ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထုဖက်က အမြဲတစေ ထာဝရ ရပ်တည် အသံပြုခဲ့သူ မြန်မာပြည်ရဲ့ သူရဲကောင်း စာရေးဆရာတဦးဖြစ်သူ ဗန်းမော်တင်အောင် (၁၉၂၀ – ၁၉၇၈) ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၃၀ မြောက် အမှတ်တရ အခမ်းအနားကို ကျန်ရစ်သူမိသားစု သားသမီးများက သမီးကြီး ဒေါ်တင်သန်းယုနေအိမ်၊ ၂၅ နှင်းဆီ ၃ လမ်း၊ ဂရင်းဗယ်လီ၊ ၉ မိုင် မရမ်းကုန်းမှာ ၂၃...
>Phaung-daw-oo pagoda festival
> ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲဓာတ်ပုံသတင်းအောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈၂၀၀၈ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အင်းလေးဒေသ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်တွင် လှေဖြင့် ဘုရားပင့်ဆောင်လာသော ဒေသခံ အင်းသားများ။ (အောက်တိုဘာ ၁၂ တွင် ရိုက်ကူးထားသောပုံများဖြစ်သည်။) (photos:AFP) No tags for this post.
>Long Prison Terms for Activists
> သခင်ပေါက်စ ထောင် ၆ နှစ်ဓာတ်ပုံသတင်းအောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈လွန်ခဲ့သည့် ၉ နှစ်ခန့်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ တွေ့ရသော ဒေါ်ဝင်းမြမြ (အလယ်မှ၊ အင်္ကျီအဖြူနှင့်)။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သူအချို့သည် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း အောက်ပါအတိုင်း နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေါ်ဝင်းမြမြ – ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်ဦးကံထူး – ၁၂ နှစ်ဦးသန်းလွင် – ၈ နှစ်ကိုမင်းသူ – ၁၃ နှစ်ကိုဝင်းရွှေ (ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်) – ၁၁ နှစ်ကိုတင်ကိုကို (မိတ္ထီလာမြို့နယ်) – ၂ နှစ် ရန်ကုန်တိုင်းသံဃာ ၇ ပါး – တပါးလျှင် ထောင်ဒဏ်...
>The Funeral Service for Artist Wathone
> ပန်းချီဆရာ ၀သုန်ရဲ့ ဈာပနကို စာပေအနုပညာရှင်နှင့် ပရိသတ်များ စည်ကားစွာ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ မြန်မာ စာနယ်ဇင်း သရုပ်ဖော် ပန်းချီလောကမှာ ထင်ရှားတဲ့ ပန်းချီ ၀သုန် (၁၉၄၇ – ၂၀၀၈)ရဲ့ ဈာပနကို ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ ၂၃ နေ့လည် ၃ နာရီက ရေဝေးသုဿန်မှာ မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ “ဆရာဝသုန်ဟာ ရေဆေးနဲ ဆီဆေးတွေ အများအပြားဆွဲခဲ့တယ်။ ကောက်ကြောင်းများရဲ့ ဟန်ချက်ကို နိုင်နင်းစွာ ဆွဲနိုင်တယ်။ ရိုးရာပန်းချီဟန်များကို လက်ရာထဲမှာ ထည့်သွင်းတီထွင်ပြီး ဆွဲတယ်။” လို့ မိတ်ဆွေတဦးက အမှတ်တရ ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ သရုပ်ဖော်ပန်းချီဆရာအဖြစ် ရိုးသားစွာ ရဲရင့်စွာ...
>13th anniversary day of the house arrest of Daw Suu
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချုပ်နှောင်ခံရမှု ၁၃ နှစ်ပြည့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေး လန်ဒန်တွင် ဆန္ဒပြ ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံရသည့်ကာလ ၁၃ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့တွင် လူအင်အား ၄၀၀ ကျော်ခန့်က ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အေဂျင်စီရုံး၊ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံး၊ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးရှေ့တို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ (အပေါ်ပုံ) တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲတွင် မြန်မာသံဃာ ၂ပါး၊ Burma Campaign UK အဖွဲ့မှ မဇိုယာဖန်း(Zoya Phan)တို့က ဒေါ်စုအမှတ်အသား သော့ကြီးကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ (အောက်ပုံများ) နိုင်ငံတကာမှ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက မြန်မာပြည်တွင် ယမန်နှစ်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၂၀၀ ခန့် ရှိခဲ့ပြီး...
>Khin Maung Zaw’s Short Stories 01
> ငြင်းပယ်ခြင်းထဲက တပေါင်းလရိပ် ခင်မောင်ဇော် အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ လတပေါင်းဟာ သူ့နောင်တော်လတွေနဲ့ အလျင်းမတူ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပေးအပ်လေ့ရှိစမြဲ။ ပဒေသာသီးနေတဲ့ ပတ္တမြားမီးပုံးတွေ ချိတ်ဆွဲထားရာ ပေါက်ပင်တွေနဲ့ လက်ပံပင်တွေ။ ဆေဇန်းရဲ့ အဝါရောင် နှင်းစက်တွေနဲ့ အပြိုင် ကြဲရင်း ပင်လုံးကျွတ် ရွှေဝါရောင်လင်းနေတဲ့ ငုပင်တွေ။ ငွေရောင်အပွင့်တွေကို ဣနြေ္ဒအပြည့်နဲ့ ချွေချပေးနေတဲ့ ထီးမြင့်ကျော့ရှင်းတဲ့ သခွပ်ပင်တွေ။ တပေါင်းကို မွှေးရနံ ကြိုင်လှိုင်သင်းစေသူကတော့ ဆရာမခင်ဆွေဦးရဲ့ သရဖီဦးထဲက သရဖီဝတ်မှုန်တွေပါပဲ။ အပင်တကာ့အပင်တွေရဲ့ ရွက်နုအထွဋ်အဖူးတွေဟာ အလုအယက် ဝေဆာစေရင်း တပေါင်းလရိပ်ကို ပူဇော်နေရောထင့်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဟောင်းကို ထမ်းပိုးရင်း နှစ်သစ်ထဲ လှမ်းဝင်ရေးရဲ့ စေတမန် လတပေါင်းခမျာမှာတော့ သောက အပူတွေ စ,လို့ပါလား။ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်...
Page 838 of 890«1...836837838839840...890»
ကိုကံညို(ထူးကြီး) - “မြို့သားတွေ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပြန်ကြည့်”
ကာတွန်းစောငုို - ခမည်း ခမက်
>Min Thu Wun (1909 - 2008)
>၀င်းပေၞမော် - နာဂစ်ရဲႚ သမိုင်း
မောင်မောင်စိုး - ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာသော တရုတ်နှင့် ဂျပန်၊ ပါဝင်ပတ်သက်လာသောမြန်မာ (ပထမပိုင်း)
>Censor Board receives pressure fromThan Shwe's grandson
Mar Mar Aye - Articles
>Saung Yun La - Replying Julia's email withapoem
ဇင်လင်း ● ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး အရွေ့သစ် အစပြုနိုင်တော့မည်လား … https://t.co/s0Ee6kR032 https://t.co/Vc4YSSOLir about 17 hours ago ReplyRetweetFavorite